Maalinta: 7-ka July, 2018
Maddaarka cusub ee Istanbul ayaa xoojin doona xidhiidhkayaga
Qoraalkii bishii Luulyo ee Raillife, Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa daabacay maqaal cinwaan looga dhigay "Xiriirkayaga Imaaraatka ee Istuudiyaanka cusub ayaa la xoojin doonaa". Qodobka Wasiirka Arslan Sida qof walba ogyahay; ku cusub adduunkeena [More ...]
Raadso Pedal La hadal Shargerahaaga
Agaasinka guud ee IETT, Karaköy iyo İstiklal Street halkaasoo gaadiidku ka sameysan yahay koronto lagana dhigayo Saldhigga Karaköy Station ayaa dhigay baaskiil. IETT waxaa loo hirgaliyay si loo soo jiito dareenka nadiifinta wax soo saarka tamarta. [More ...]
Qeybta Socdaalka ee Baku-Tbilisi-Kars 50 Thousand Tons Freight
Veysi Kurt, Maareeyaha Guud ee TCDD Transportation Inc., wuxuu cadeeyay in Kahramanmaraş ay dhaqaaq weyn ku qaadatay sidii ay ugu noqon lahayd maalmihii duulimaadka tareenka. e, [More ...]
Mucaaradka Mithatpaşa Traffic
Sababta oo ah marinka u dhexeeya Balçova Viaduct iyo rugta gaaska ee jirta, 9 ayaa waddo qorsheyaal gaadiid oo cusub oo gobolka ka socda tan iyo bishii Luulyo. İzmir, oo sii wada hirgelinta mashaariicda si loo fududeeyo gaadiidka magaalada [More ...]
Codsiyada kahor-imaanshaha waxaa loo soo aruuriyay Wadada Wadooyinka ee Erzincan-Trabzon, taas oo ah mid kamid ah mashruucyada meerayaasha ee Trabzon, ee Sahanka, Mashruuca, Injineeriyada iyo Adeegyada La-talinta. [More ...]
New Metro iyo Ankar Lines oo imanaya caasimadda
Khadadka New Meta iyo Ankaray waxay imaanayaan caasimada: injiilka gaadiidka caasimada lama joojinayo. Duqa Magaalada Ankara Assoc. Dr. Mustafa Tuna, si loo naaquso taraafikada caasimadda maalin walba gadiidka cusub [More ...]
Tilmaamaha Tilmaamaha iyo Xarunta Imtixaanka Xarunta Imtixaanka Isbeddelka
Sida ku cad faahfaahinta lagu daabacay Gazette Rasmiga ah maanta (6 Luulyo 2018), Wasaaradda Gaadiidka waxay wax ka beddeshay tababarka tareenka iyo shuruucda xarunta imtixaanka. Tababarka tareenka iyo xarunta imtixaanka ee Wasaaradda Gaadiidka [More ...]
Samsun guddoomiye Kaymak oo ku dhawaaqay mashruuca tareenka xawaaraha sare
Warka Samnsun - Guddoomiyaha gobolka Samsun Cusmaan Kaymak, 8 Samsunhaber.com Magazine. Tirada mashruuca tareenka xawaaraha sare ayaa la qiimeeyay. • Maxuu noqon doonaa ku-biirinta mashruuca tareenka xawaaraha xawaaraha sare ee Samsun-Ankara iyo dhaqaalaha gobolka? Sanadihii ugu dambeeyay dalkeena [More ...]
3 ee Antalya. Howlaha Nidaamka Isgaadhsiinta ee Marxaladda Hore
25 kiiloo mitir ugu weyn ee 3 ee u dhexeeya Varsak iyo Zerdalilik, waa mashruuca ugu weyn Antalya ee leh ilaha bulshada. Shaqada Nidaamka Tareenka Marxaladu waxay ku soconayaan xawaare buuxa. Qiyaastii ku dhawaad ​​700 milyan oo ginni ayaa ah mashruuca Varsak- [More ...]
Trambus ee waddooyinka magaalada Sanliurfa bisha September
Diyaar garowgii ugu dambeeyay ayaa laga sameynayaa Dowlada Hoose ee Magaalada, oo fulisay mashruuca Trambus ee usanlıurfa. Qeybta ugu dambeysa ee mashruuca dhameystirka nidaamyada tamarta dariiqa ee lagu baaro qeybta maamulka ee aqoon isweydaarsiga Madaxweyne Farmaajo, bisha 2 [More ...]
Wiil 13-jir ah oo kor fuulay gaari xamuul ah xarun tareen oo ku taal Darmstadt, Jarmalka, ayaa u dhintay naxdin koronto. Booliska Darmstadt ayaa sheegay in kooxda caafimaadka ay yimaadeen goobta cunuggu aanu noolayn [More ...]
Metro wuxuu imanayaa Mersin oo leh 15 Station
15-Saldhig Mileteri ayaa u yimaada Mersin: Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin waxay bilaabi doontaa dhismaha waqti gaaban waxayna siin doontaa xalka aasaaska dhibaatada taraafikada magaalada waxayna abuuri doontaa horumarin dhanka gaadiidka dadweynaha. [More ...]
Tababarka Musharrixiinta Vatman ee Eskisehir Baaritaanada Trams cusub ayaa sii socota
Mashruuca Tramway, kaas oo ah midka ugu weyn ee maalgashi ee Eskişehir Metropolitan Municipal, 6. In kasta oo dhismaha khadadka masraxa uu si xawli ah u socdo, tababaridda ardayda ee taraamyada ayaa la geyn doonaa isla markaana tijaabinta tijaabada tareenka cusub isku mar. [More ...]